Spotify waxay sii wadaa inay maalgashi ku sameyso barnaamijka "Podcasting" iyadoo la adeegsanayo jaantusyo cusub | Wararka IPhone
Spotify waxay sii wadaa inay maalgashi ku sameyso Podcasting shaxan cusub
Angel Gonzalez | 15/04/2021 23:59 | Barnaamijyada IPhone, Noticias
ka Nayroobi ilaa bilowgii cudurka faafa waxay noqdeen madadaalo sii kordheysa oo loo raadinayo kooxaha da 'kasta. Noocyada kala duwan, iyo kala duwanaanta 'podcasters' ayaa ka dhigaysa hal ikhtiyaar oo dheeri ah in waqtiga la dhaafiyo inta isboortiga la sameynayo ama la nasanayo, tusaale ahaan. Caan ka noqoshada caanku waxaa og shirkadaha waaweyn iyo Apple iyo Spotify, iyo kuwo kale, waxay maalgashi ku sameynayaan casriyaynta barnaamijyadooda si ay ula jaan qaadaan kacdoonka Podcast-ka. Munaasabaddan, Spotify ayaa bilaabay Jaantusyada Podcast ee waddanka si la mid ah iyaga ayaa lagu heli karaa heesaha. Waxaa laga heli karaa waddamada qaarkood waxaana lagula qabsan doonaa joqraafiyada adduunka mustaqbalka.
Spotify waxay sii wadaa inay kobciso boodhadhka shaxanka cusub
Isku soo wada duuboo maanta 26 suuq oo ku yaal Spotify aaladaha mobilada (iOS iyo Android), liisasku ma wadaagayaan oo keliya kuwa ugu dhaqsaha badan xilligan la joogo adeegsadayaasha, laakiin sidoo kale waxay liis garayn doonaan bandhigyada ugu caansan guud ahaan gobolkaaga. Dhageystayaashii dhowaa.
Iyadoo loo marayo warsaxaafadeed Spotify ayaa ku dhawaaqday imaatinka jaantusyada Podcast Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Brazil, Jarmalka, Mexico iyo Switzerland. Kuwani waxay noqon doonaan waddammadii ugu horreeyay ee wax u arki kara si la mid ah sida ay u sameeyaan heesaha, podcasts-ka isbeddellada ku socda, markay sii kordhayaan iyo dhaqdhaqaaqooda caan. Falaaraha gaduud iyo cagaarba waxay cadeynayaan in Podcast-ka laga hadlayo uu sare u kacay ama hoos udhacay darajada kuwa ugu dhageysiga badan
Intaas waxaa sii dheer, waxaa weheliya imaatinka a web gaar ah si gaar ah ugu heellan podcasts. Dhexdeeda waxaad ku arki kartaa qiimeynta iyo sidoo kale iyaga oo u kala soocaya qaybo leh casriyeyn fudud, fudud oo si wanaagsan loo daryeelay. Laakiin degelkan waxaa laga heli karaa oo keliya Mareykanka, xilligan.
Iyada oo cusub Spotify wuxuu si gaar ah ugu jeedsadaa faylalka. Wadamada qaarkood sida Mareykanka waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan oo ku saabsan nuucaan iyo liistada liiska: boodhadhka ugu caansan, dhacdooyinka ugu caansan, tirakoobyo gaar ah oo loogu talagalay mid kasta oo ka mid ah dhacdooyinka iyo qaabab cusub oo lagula wadaago waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Spotify waxay sii wadaa inay maalgashi ku sameyso Podcasting shaxan cusub
Xanta badan ee ku saabsan kamaradaha moodeelka soo socda ee soo socda
WhatsApp waxaa lagu cusbooneysiiyay hagaajinta muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyaha